Na-achọ Mkpebi nke Abụọ? Otu narị? | Martech Zone
Na-achọ Mkpebi nke Abụọ? Otu narị?
Monday, August 3, 2009 Tuesday, October 20, 2015 Douglas Karr
Enwere ezigbo ọkụ ọkụ mgbe m kwalitere tinye n'ọrụ ìgwè mmadụ. Ndị nọ n'ime imewe ndị m na-asọpụrụ nke ukwuu n'agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị ihu abụọ iji nwee ekele maka ìgwè mmadụ na ndị ọzọ usoro ntanye dị ka 99designs, mgbe akwadoro ego imewe ụlọ ọrụ dị ka nke ọma.
Ekwetaghị m na ọ bụ otu ma ọ bụ nke ọzọ, M do nwee ekele maka ha abụọ! M aka a di na nwunye nke Mba! Spec na-akwado na-abịa na ụfọdụ ndụmọdụ:
Kedụ ka mbido azụmaahịa si enweta nnukwu imewe na enweghị ego iji kwụọ ụgwọ ya?
Kedu ka ndị na-emepụta ọhụụ si enweta ohere iji nweta aha ha ma rụọ ọrụ n'ahịa (na-emeghị atụmatụ efu!)
Enwere ike ịnwe nhọrọ nke atọ, kwa. Ọ bụrụ na azụmahịa gị ma ghara ịkwụ ụgwọ nnukwu onye mmebe, ikekwe ị nwere ike ịnweta ụfọdụ echiche gbasara imewe ma ọ bụ echiche echiche gị. Nke ahụ bụ naanị ihe Nzughachi echiche amalitela.
Nzughachi echiche bụ ntakịrị ihe mashup… n'etiti netwọkụ mmekọrịta maka ndị na-emepụta ihe na ụdị ụdị Digg iji votu maka echiche imewe. Ikekwe ihe kachasị ama bụ na ịkwesighi ịkwado echiche a n'ihu ọha, ị nwere ike ijikwa onye nwere ike ịbanye n'echiche gị. Nke a nwere ike ịba uru maka nzaghachi ụdị otu!
Gịnị kpatara Andrew ji bupụta saịtị ahụ?
Dị ka ahịa director, Andrew Follett ama ulo oru ọtụtụ imewe echiche… jiri nlezianya emailing ha si ndị enyi, ezinụlọ na ndị ọrụ ibe, mgbe ịmata nkọwa. Usoro a were oge dị ukwuu ma ọ bara ezigbo uru. N’ọnwa Jenụwarị, Andrew gakwuuru otu enyi ya Mmmmmmmmmmmm banyere echiche. DevBridge kpebiri isoro Andrew soro ya na mmepe malitere na March. Ejiri nzaghachi echiche na May.
Gịnị bụ Andrew na-atụ anya na ọdịnihu nke saịtị?
Ugbu a, Andrew na-arụ ọrụ na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na saịtị ahụ na ndị na-ekere òkè na-ekere òkè. Ka ha na-aga n’ihu na-eto, ha chọrọ iji echiche nzaghachi n’ezie iji bulie ma mepụta atụmatụ ndị ọzọ na saịtị ahụ.
Echere m na nke a bụ nnukwu echiche! Ya mere, kudos to Mmmmmmmmmmmm na mmepe nke saịtị!
Tags: echiche echicheNtụgharị uchenzaghachi ndị nrụpụtanzaghachinzaghachi ahiauiui nzaghachionye ọrụ ahụmahụnjirimara interface nzaghachiuxnzaghachi uxnzaghachi imewe weebụ
Nnukwu echiche adịghị mkpa
Otu Akaụntụ Google Analytics, Otutu ngalaba